Zvese zvaunoda kuti uzive kugadzirisa kune iOS 12 | IPhone nhau
Zvese zvaunoda kuti uzive kugadzirisa kune iOS 12
iOS 12 inoburitswa nhasi kune vese vashandisi ve iPhone ne iPad vane zvishandiso zvinoenderana. Mushure memwedzi yakati wandei kuyedza maBetas eiyi nyowani yekushandisa system, iyi ndiyo vhezheni yekupedzisira izvo zvinogona kutorwa pasi kuti unakirwe nenhau kumatunhu edu.
Ino ndiyo nguva iyo vazhinji venyu mune kusahadzika nezve kuti inogadziridzwa sei, kana kuti, pamusoro pazvo ndeipi nzira yekuvandudza yepamusoro. Dzosera, gadziridza, ramba uchiedza Betas ... Isu tinogadzirisa kusahadzika kwako kwese muchinyorwa chino.
1 Chii chitsva muIOS 12
2 Maitiro ekuvandudza kune iOS 12
3 Kana iwe waiyedza iyo iOS 12 Beta
4 Kupfuura zvese, moyo murefu
Chii chitsva muIOS 12
Chekutanga pane zvese, zvinogara zvirinyore kuziva kuti ndeipi nhau enzira nyowani yekushandisa, kuti uone kana ichitibhadharira iyo yekuvandudza uye, pamusoro pazvose, kutora mukana wavo kana tavandudza. Iyi vhezheni itsva yeApple haiunzi nhau dzakawandisa maererano nezvinoonekwa nemushandisi, asi zvinodaro inovimbisa kugadzirisa kuita pane zvishandiso zvekare izvo zvinofanirwa kukukurudzira kuti utore.
Iwo mapfupi, iyo nyowani yekuzivisa nzvimbo, iko kuvandudzwa kweKusakanganisa mamiriro kana mamamenyu matsva ayo anokupa iwe ruzivo nezve mashandisiro echigadzirwa chako, pamwe neiyo nyowani kutonga kweakaundi evana ... hazvisi zvinhu zvinokatyamadza asi ipapo vari runyorwa rurefu rwemashoko atichakurukura zvakanyanya en ichi chinyorwa.
Maitiro ekuvandudza kune iOS 12
Maitiro acho ari nyore chaizvo, iwe unofanirwa kuwana chete marongero eichi chako uye mumenyu «General> Software kugadzirisa» iyo yekuvandudza inofanira kuoneka. Dzvanya Kuisa uye chishandiso chako chobva chakurodha pasi kuti chiise gare gare otomatiki Iyi ndiyo yekuvandudza kuburikidza neOTA iyo muzviitiko zvakawanda ndiyo inonyanya kukodzera kune vazhinji vashandisi nekuda kwekureruka kwayo. Asi zvinogona kunge zvisiri zvakakunakira iwe.
Kana iwe uine junk yakawanda pane chako chishandiso, kana iwe uchida kuita app kuchenesa nekuti iyo iPhone nzvimbo yatove izere, kana kana iwe uri kucherechedza kuti yako iPhone kana iPad isiri kushanda sezvazvinofanira kuita munguva pfupi yapfuura, lkana zvirinani kuita kudzoreredza kuburikidza iTunes kuisa iOS 12 kuitira kuti zvese zviite sekunge iri iPhone nyowani. Kana iwe usingazive kuzviita, in Iyi link Tinokutsanangurira iwe zvakadzama.
Kana iwe waiyedza iyo iOS 12 Beta
Kana iwe waitova neIOS 12 pane chako chishandiso, kungave neApple Ruzhinji Beta chirongwa kana neVagadziri, iwe unogona kunge wakaisa yazvino vhezheni iyo Apple yakaburitswa pazuva rimwe chetero 12, inonzi Golden Master. Iyi vhezheni, kunze kwekunze kusanzwisisika, yakafanana neiyo yepamutemo vhezheni iyo Apple inotanga nhasi, saka hazvizokukwakire iwe kuti pane inogadziridza iripo, kana yako iPhone yaona kuti iwe watove nayo yaiswa.
Kana iwe uchida kuenderera kuyedza Betas, haufanire kuita chero chinhu, uye kugadziridzwa kweBetas kucharamba kuchionekwa kana Apple ikaburitsa ivo. Asi kana iwe uchida kuzorora uye kugara nezvinyorwa zvepamutemo, uchafanirwa kudzima iyo Beta mbiri iyo iwe unayo mune Zvirongwa zveyako kifaa. Enda ku "Zvirongwa> Zvakajairika> Mbiri" uye bvisa iyo mbiri kubva kuIOS 12 Beta iyo yawakaisa. Tangazve chigadzirwa chako uye iwe unenge uri kunze kwechirongwa cheBetas. Kana paine vhezheni yepamutemo vhezheni, ichaonekwa muMagadzirirwo sevamwe vese, asi hauchazoona Betas.
Kupfuura zvese, moyo murefu
Ndiro rekupedzisira zano: moyo murefu. Kana Apple yaburitsa vhezheni itsva senge iOS 12 ivo vari mamirioni avanhu vanomhanyira kugadzirisa sekunge pasina mangwana. Zvinogona kukutorera nguva yakati rebei kuti uoneke, zvinogona kuoneka asi zvinokundikana kudhawunirodha nekuti maseva akadonha, kana nguva yekurodha inogona kuve yekusingaperi ... kana izvi zvikaitika kwauri, siya iPhone yako mundiro yakabatana neWifi manheru ano uye mangwana ungatove uine iOS 12 yakadhindwa uye yakagadzirira kugadzirisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 12 » Zvese zvaunoda kuti uzive kugadzirisa kune iOS 12
Logitech Crayon, isu tinoongorora imwe yakachipa sarudzo kune Apple Penzura
4 Nyowani iOS 12 Zvimiro Hazvigoneke paVakwegura iPhones